Mareykanka oo dib u fasaxay Kaalmadii uu Dowladda Federaalka Musuqa ugu gooyay. | XAL DOON
Home NEWS Mareykanka oo dib u fasaxay Kaalmadii uu Dowladda Federaalka Musuqa ugu gooyay.
Mareykanka oo dib u fasaxay Kaalmadii uu Dowladda Federaalka Musuqa ugu gooyay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in todobaadkan ay dib u billowday taageeraddii milatari ee ay siin jirtay ciidmada dowladda Soomaaliya, si ey u taageerto howlgallada argagixiso la dirirka ee gobolka Shabeellada Hoose.
Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa afhayeen u hadlay safaaradda oo la yirahdo Ryan Grizzle, waxa ku sheegay in tallaabadan Mareykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonidii Mareykanka uu ku qabaan hanaanka maamulka dhaqaalaha ee dowladda.
Ryan waxa uu yiri, “waxaan ugu baaqeynaa Dowladda soomaaliya inay mudnaanta koobaad siiso wax ka beddelka iyo tayeynta hay’adaha amniga, si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay amaanka dalkooda la wareegaan.”